West Seattle - Drive Safe - so Archives - Seattle Traffic
Category: West Seattle – Drive Safe – so
Ka hubi xaaladda socodka baabuurta ka hor inta aadan bixin kaameradda maabka waqtiga dhabta ee waddada, iyo in ka badan. Maabka Socotada Seattle (Kaameradda Jidka)Maabka Baarkinka Seattle (Interactive)Qiimaha Jid-dhigashada Seattle (Interactive)Qiyaaso Qiimaha DHABTA AH Socodkaaga Xiritaanka Buundada Sare ee West Seattle, Jidadka lagu Leexdo Click to open PDF in new window
Nagu caawi inaan u firaaqeyno (buundada hoose) ee Spokane St Swing Bridge baabuurta gurmadka deg-degga ah, basaska, iyo xamuulka culus. Buundada hoose imika way ka xiran tahay baabuurta aan loo oggoleyn maalmaha toddbaadka laga bilaabo 5-ta subax ilaa 9-ka fiidkii iyo dhamaadka toddobaadka 8-da subax ilaa 9-ka fiidkii. Jidadka kale ee kuu furan waxa ka […]
Xiritaanka Buundada Sare ee West Seattle waxey dadka deggan waddooyinka lagu leexdo iyo xaafadaha Duwamish Valley ku abuurtay saxmad iyo naqas hawo xumo ah, sida Highland Park, Roxhill, South Delridge, Roxbury, Georgetown, South Park iyo SODO. Marka ay tahay waqtiga safarka, socodka ama kaxeynta, baaskiileyn ama mooteyn, raacidda baska, wada raacista faanka, ama joogista xaafadda, oo dhamaantiin idiin ka badbaadin karta madax […]